Ny rindrambaiko tsara indrindra sy ny fitaovana an-tserasera ho an'ny orinasan-dia sy fizahan-tany amin'ny 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Ny rindrambaiko tsara indrindra sy ny fitaovana an-tserasera ho an'ny orinasan-dia sy fizahan-tany amin'ny 2021
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Alemana • Hostpost • Hospitality Industry • Vaovao • teknolojia • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny rafitra famandrihana an-tserasera tsara indrindra
Ao amin'ny tontolon'ny haitao avo lenta ankehitriny, ny rindrambaiko sy fitaovana an'ny antoko fahatelo dia nanampy ny orinasa marobe hanatsara ny marketing sy ny fanohanan'ny mpanjifa azy ireo nefa tsy mila manakarama olona marobe.
Noho ny fanovana nomerika, ny fitaovana toy izany dia mahita fampiharana be dia be amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ihany koa.
Nilaza i Regiondo fa namorona ny rafitra famandrihana an-tserasera tsara indrindra izy ary nanolotra fampidirana ny Regiondo Bookying Systems ho an'ny fitsidihana sy hetsika.
Nanontany vondronà mpandraharaha mpizahatany izahay momba ireo fitaovana an-tserasera tsy zakan'izy ireo raha tsy eo.
Regondo dia mizara ny zavatra hitan'izy ireo hanampiana ireo orinasa hiasa mahomby kokoa ary hifandray tsara kokoa.
Ny rafitra famandrihana dia manolotra vahaolana rindrambaiko ahafahan'ny mpanjifa mety hanao famandrihana an-tserasera amin'ny alàlan'ny tranokalanao sy fantsona hafa. Fa iza amin'ireo no tsara indrindra eny an-tsena?
Ity ny fampisehoana an'ny Regiondo:
Mety hitongilana kely isika, saingy tianay ny vokatray ary miasa mafy izahay hahazoana antoka fa afaka manome ny vahaolana famandrihana tsara indrindra eny an-tsena.
Natombokay ny dia nataon'ny Regiondo tamin'ny 2011 tany Munich, Alemana, ary niara-niasa tamin'ny mpamatsy fizahan-tany mahafinaritra sy mahaliana mihoatra ny 8,000 eran'izao tontolo izao izahay hatrizay.
Ho tian'ny mpanjifanao sy ny mpiasao ny volavolan'i Regiondo. Mora ny mitety ka afaka mitsambikina avy hatrany ianao nefa tsy misy fiofanana.
Tsy maninona na mivarotra tapakila 50 na 500,000 XNUMX isan-taona ianao dia atsangana i Regiondo hanamora ny fiainanao. Ny fahaizantsika sy ny endri-javatra mandroso dia mety amin'ny fikirakirana boky lehibe.
Ny lozisialy Regiondo dia manara-maso ny famandrihanao rehetra. Ny varotra an-tserasera sy an-tserasera ary ho an'ny mpiara-miasa dia voarakitra sy voatahiry ary voadinika mora foana.
Fa maninona no mifidy Regiondo?
Ny famandrihana rehetra ao anaty rafitra iray dia manampy anao:
• Ampitomboy ny varotra • Mitahiry loharanon-karena • Mitantana fiasa
✓ Fitantanana ny lisitra mivantana amin'ny fotoana tena izy
✓ Fitantanana loharano azo antoka sy afovoany
✓ Manampy anao hitombo haingana izahay nefa tsy mandany vola
✓ Izahay no sehatra tsara indrindra amin'ny famandrihana betsaka
✓ Manana interface interface intuitive izahay.
✓ Manome anao ny fifehezana feno ny endrika sy ny tsapan'ny fivarotana tapakila an-tserasera izahay.
✓ Ekipa an-tsambo sy mpanohana izay vonona hanampy foana.
✓ Ny rindrambaiko dia nohamarinina ho amin'ny fiovam-po
✓ Mifandraisa amin'ireo OTA lehibe indrindra amin'ny tsindry iray
Te hahita an'i Regiondo amin'ny asany? Fenoy ny takelaka takinay mba hangataka ny démo maimaimpoana ho anao sy ny fitsidihana ny vokatra!
FareHarbor dia mamorona fitaovana matanjaka izay manampy ireo mpikirakira fizahan-tany hanao ny asany amin'ny mora sy mahomby. Manolotra rindrambaiko famandrihana an-tserasera sy loharanom-pahalalana ho an'ny orinasam-pizahantany sy hetsika izy ireo.
Miaraka amin'ny ekipa misy mpikambana mahafinaritra sy maro fiteny amin'ny fiteny maro maneran-tany, Fareharbor dia mampanantena fa hanampy anao hitombo.
Maninona no mifidy FareHarbor?
✓ Rindrambaiko backend nohavaozina amin'ny sehatry ny orinasa
✓ Fanohanana 24/7 miampy fiofanana manokana.
✓ Hamindra ny famandrihana ho avy izahay ary hanavao ny tranonkalanao.
✓ Ampitombo ny fantsonao amin'ny fantsom-pizarana efa niorina
✓ Izahay no orinasa mandroso haingana indrindra amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fizahantany
Mba hahazoana demo mivantana ary hahitana ny fomba fiasan'ny FareHarbor ho anao, tsotra fenoy ny taratasy ao amin'ny tranonkalany.
Bokun dia orinasa manolotra Engine Booking an-tserasera, Fitantanana Channel, fitantanana inventarika sy loharanom-pahalalana, tsena B2B, tatitra ary tranokala ho an'ny orinasa fizahan-tany sy hetsika.
Fa maninona no mifidy Bókun?
Manampy anao izahay hanombohana sy hampitomboana ny asanao fitsangatsanganana sy hetsika.
✓ Mahazoa famandrihana bebe kokoa: amidio amin'ny fantsona maro araka izay itiavanao azy, hahatratra ny mpanjifa manerantany
✓ Mitsitsy fotoana: mampitombo ny fahaizanao ary mitantana ny asan'ny orinasao amin'ny toerana iray
✓ Ampitomboy ny orinasao: mitadiava fotoana ahafahanao mampitombo ny fizarana anao, mampitombo ny vokatrao ary manangana fidiram-bola vaovao ho an'ny orinasanao
Raha te hampiasa Bókun ianao dia mila tsotra izao misoratra anarana ho an'ny fitsarana azy ireo maimaim-poana.
Checkfront dia rindrambaiko fitantanana raharaham-barotra mifototra amin'ny rahona natao ho an'ireo mpandraharaha mpizahatany, orinasa mpanofa ary mpamatsy trano.
Fa maninona no misafidy Checkfront?
✓ Aza adino ny famandrihana hafa: maka famandrihana ao amin'ny tranonkalanao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza miaraka amin'ny fisian'ny kalandrie mivantana mamaly
✓ Manaova veloma ny takelaka: araho ny famandrihanao, tantano ny famandrihanao sy ny fahafaha-anananao, ary mahazoa fotoana tena izy momba ny orinasanao amin'ny alàlan'ny tabilao afovoany
✓ Tapaho roa ny enta-mavesatrao: mandeha ho azy ny asa miverimberina
Manome fanandramana maimaimpoana 21 andro ny Checkfront ka raha mahaliana anao ny hiditra amin'ireo endrik'izy ireo sy ny fanohanany, fotsiny mamorona kaonty. Tsy misy carte de crédit dia ilaina.
Redzy dia rindrambaiko famandrihana sy fizarana mahaleo tena famandrihana, natao ho an'ny Operations Tour & Action.
Fa maninona no mifidy an'i Redzy?
✓ Ataovy mandeha ho azy ny asan'ny orinasa
✓ Fanaraha-maso finday sy multi-efijery
✓ Famoronana tranokala iray-tsindry
✓ Tatitra fandraharahana mandroso
✓ Famoronana fanehoana vahiny
✓ Fampifangaroana marobe: (Zapier, TripAdvisor Review Express, Facebook Shop & maro hafa).
✓ Ny tahan'ny fotoana sy ny fitantanana ny vidiny
Hanombohana ny fiovanao amin'i Redzy dia azonao atao ny misoratra anarana ho azy ireo Andrana maimaim-poana. Tsy misy carte de crédit dia ilaina.
Trekksoft dia vahaolana famandrihana lehibe ho an'ny Day Tour Companies.
Fa maninona no misafidy Trekksoft?
✓ Mivarotra fitsangatsanganana bebe kokoa amin'ny fampifandraisana ny varotra eo anoloana sy any aoriana
✓ Mitantana fiasa amin'ny alàlan'ny automatisation ny fitantanana sy ny lahasa tanana
✓ Ampitomboy ny orinasao amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa erak'izao tontolo izao
Mba hangataka demo amin'ny ekipan'ny fampandrosoana azy ireo dia mila fotsiny ianao fandaharana antso demo.
Ny fitaovana CMS dia manolotra vahaolana mora vidy sy azo antoka ho an'ny tompona izay te hanana fifehezana ny tranokalany sy hitantana ny atiny rehetra ao an-trano. Andao hojerentsika hoe iza amin'ireo safidy ambony 3 an'ny CMS an'ny mpizahatany.
WordPress no rafitra fitantanana votoaty maimaimpoana maimaimpoana maimaim-poana sy malalaka malalaka eran'izao tontolo izao. Izy io dia mety amin'ny mpampiasa, azo namboarina tanteraka, ary tena mora ianarana. Amin'ny WordPress, afaka manangana tranokala ianao, manomboka bilaogy ary mivarotra an-tserasera mihitsy aza.
Fa maninona no mifidy WordPress?
✓ WordPress dia maimaim-poana, mila mandoa vola fotsiny ianao amin'ny fampiantranoana
✓ Mora ny mampiasa sy mianatra; tsy mila fahalalana momba ny kaody
✓ Manome anao fifehezana feno ny tranokalanao ny WordPress; Tena azo namboarina izy io, ary voafehinao tanteraka ny tranokalanao sy ny angon-drakitrao rehetra
✓ Ny fahaizany mitoraka bilaogy dia natsangana ary mora ampidirina
✓ Azonao atao ny manitatra mora foana ny fiasan'ny tranokalanao amin'ny plugins
✓ Misy lohahevitra azo ekena an'arivony (ny sasany amin'izy ireo maimaim-poana) azo zahana amin'ny Internet
✓ Ireo tranonkala WordPress dia SEO sariaka sy mamaly
✓ Afaka miditra ianao fampiharana finday amin'ny fitantanana ny tranokalanao an-dalana
✓ Manome fitantanana haino aman-jery matanjaka ny rafitra
✓ Fahombiazana avo sy filaminana
Hanangana ny tranokalanao na ny bilaoginao, mamorona kaonty WordPress.com!
Squarespace dia rafitra fitantanana atiny iray ao anaty iray manolotra vahaolana amin'ny fananganana tranokala, fampiantranoana ary e-varotra.
Fa maninona no misafidy Squarespace?
✓ Iray amin'ireo tranokala mora ampiasaina indrindra io
✓ Ny modely tranokala avo lenta dia misy amin'ny tranokala isan-karazany, izay misy portfolio, bilaogy, pejy fandraisana, ary fivarotana an-tserasera
✓ SEO namboarina
✓ Mpampiasa interface tsotra
✓ SSL maimaim-poana taratasy fanamarinana
✓ Volavola mamaly amin'ny fijerena finday
✓ E-Varotra mifangaro
To manomboka amin'ny Squarespace, mila misafidy modely mifanaraka amin'ny orinasanao ianao ary avy eo mamorona kaonty. Squarespace TSY manana drafitra maimaim-poana ka raha vantany vao vonona ny handefa ny tranonkalanao dia mila misafidy drafitra ianao ary misoratra anarana.
Webflow dia vahaolana mifangaro eo anelanelan'ny fananganana tranokala nentim-paharazana toy ny Squarespace, ny rafitra fitantanana atiny kilasika toa ny WordPress, ary ireo tranonkala manana kaody mafy (na tranokala tsy CMS).
Maninona no mifidy Webflow?
✓ Izy rehetra dia sehatra iray mitambatra CMS, fitaovana marketing, backup ary maro hafa
✓ Webflow dia manome anao fahalalahana hamorona tranokala namboarina tanteraka: amboary ny zava-drehetra manomboka amin'ny fanarahana ny haavon'ny tsipika ary havaozy isaky ny segondra ny ohatra loko rehetra
✓ Kanvas hita maso tanteraka izany tsy mila kaody
✓ Sintomy ary alatsaho ny fiasan'ny mpanamboatra pejy
✓ Afaka mamorona sary mihetsika sy fifandraisana mora foana ianao
✓ Volapoky (ovay)
✓ Tranonkala Webflow dia sariaka amin'ny SEO
✓ Asao ny tonian-dahatsoratra sy mpiara-miasa hanampy na handinika atiny ao amin'ny tranonkalanao
✓ Vahaolana fampiantranoana matanjaka
✓ SSL MAIMAIMPOANA taratasy fanamarinana
✓ Maimaimpoana mandra-panaovanao vonona handefa
Raha hijery ilay sehatra dia mila fotsiny ianao fisoratana anarana hahazoana kaonty Webflow maimaim-poana amin'ny Internet.
Ny fitaovam-pivarotana dia manampy anao hanatsara ny fizotranao sy hampitombo ny fidiram-bolanao raha mitazona ny angon-drakitry ny mpanjifa voatahiry sy voalamina tsara avokoa. Mamakia hatrany mba hijerena ireo ampiasain'ny mpamatsy fizahan-tany sy mpikarakara hetsika.
Apollo dia sehatra fifanakalozana data-voalohany izay manampy anao amin'ny fanatanterahana, famakafakana ary fanatsarana ny paikadim-pitomboanao.
Fa maninona no mifidy Apollo?
✓ Apollo dia manampy anao hamely ny nomeraonao
✓ Mitadiava ny vinavinanao tsara sy ny làlana vaovao
✓ Mandehana fampielezana mailaka sy antso
✓ Manangana fivoriana
✓ Fakafakao sy ahodino ny fizotranao
✓ Maimaimpoana misy drafitra sy demo misy rindrambaiko
Vonona ny hanandrana an'i Apollo? Ampidiro ny mailaka ataonao ary manomboka amin'ny FREE. Azonao atao ihany koa mahazo DEMO hijerena ny fomba anampian'ny Apollo orinasa hanangana dingan-dava miverimberina amin'ny fametrahana fivoriana, fanidiana ny vola miditra, ary famakafakana ireo paikady varotra sy marketing.
Qwilr dia rindrambaiko antontan-taratasy maoderina misy fampidirana sy modely isan-karazany. Azonao atao ny mamorona tolo-kevitra mahasarika izay manampy amin'ny fanakatonana fifanarahana bebe kokoa.
Fa maninona no mifidy Qwilr?
✓ Mamorona tolo-kevitra manokana amin'ny tsindry iray tsy ilaozanao ny CRM
✓ Hisintona ny angona vidiny mivantana avy amin'ny CRM anao
✓ Qwilr dia manolotra karazan-tolokevitra efa vita mialoha sy trano famakiam-boky misy singa azo ampiasaina indray hamoronana tolo-kevitra miavaka izay mifanaraka amin'ny torolalan'ny marikao
✓ Azonao atao ny mamorona firariana horonan-tsary mifampitohy, fandinihana tranga na fampisehoana demo
✓ Azonao atao ny manampy ny mpividy amin'ny calculer ROI interactive sy teny namboarina
✓ Misy ny antsipirian'ny pejy amin'ny antsipiriany
✓ Azonao atao ny manampy fankatoavana e-sign
✓ Manampy anao i Qwilr mandeha ho azy faktiora ary afaka mifandray amin'ny rafitra fandoavam-bola isan-karazany
Azonao atao ny manandrana Qwilr FREE na mangataka démo maimaimpoana ao amin'ny tranonkalany - fotsiny misoratra anarana amin'ny kaonty Qwilr.
Ny fitaovana marketing automatique dia manampy anao hiasa amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny fanangonana fotoana sy fandaminana mialoha ny fampielezan-kevitrao. Andao hojerentsika hoe iza no mety indrindra amin'ireo orinasan-dia sy fizahan-tany.
Mailchimp dia sehatra fanaovana marketing automatique malaza manolotra marketing amin'ny mailaka, fananganana tranokala ary serivisy dokambarotra nomerika. Io dia ahafahanao miaraka mitondra ny angon-drakitra sy ny haino aman-jery.
Fa maninona no mifidy Mailchimp?
✓ Manamboara mailaka, doka ara-tsosialy, pejy fipetrahana, karatra paositra ary maro hafa amin'ny toerana iray
✓ Fitaovana famolavolana mora ampiasaina sy maodely azo ovaina ho an'ny mailaka, pejy fitodiana ary endrika
✓ Mpanampy mpamorona manana herinaratra AI hamokarana endriny manokana
✓ Tehirizo amin'ny toerana iray ny angonao rehetra sy ny hevitrao
✓ Fanohanana 24/7 fanohanana nahazo loka
✓ Fampidirina app 250+ hampifandray ireo fitaovanao rehetra amin'ny Mailchimp
✓ Lisitry ny mpamaritra azo antoka
Ianao dia afaka manomboka amin'ny MailChimp ao amin'ny tranonkalany ary avy eo aza misintona ny fampiharana finday ho an'ny Android na iOS. Misy drafitra maimaim-poana koa - afaka mandefa mailaka hatramin'ny 10,000 isam-bolana sy 2,000 isan'andro ianao maimaim-poana.
Ny porofo dia fitaovana mety indrindra hananganana fahatokisana ny marikao. Miteraka mipoitra tampoka ao amin'ny tranonkalanao mampiseho fahana mivantana na totalin'ny olona tena izy izay nanao hetsika na nitsidika ny tranokalanao. Amin'ny alàlan'ny fampidiranao izany ao amin'ny fantsom-pivarotanao dia afaka manova mpitsidika hatramin'ny 300% bebe kokoa ianao ho lasa mpitarika, demos ary varotra.
Mamorona tsy fahampiana amin'ny isa mivantana amin'ny mpitsidika
Manangana fahatokisana miaraka amin'ny Hot Streaks
Ampitomboina ny fahatokisan-tena amin'ny Hetsika farany
Fa maninona no misafidy ny porofo?
✓ Mora manangana
✓ Fikirana mahazatra
✓ Fanadihadiana tsara tarehy
✓ Zapier Integration
✓ Hafainganam-pandeha haingana Freaky
✓ A / B fitiliana
Manolotra 1 volana izy ireo amin'izao fotoana izao FREE - mila mametraka ny pixel marketing Proof fotsiny ianao amin'ny tranokalanao (izao no fomba) ary jereo raha mahazo varotra bebe kokoa ianao.
Buffer dia fitaovana fandaharana amin'ny haino aman-jery sosialy ampiasain'ny orinasa maherin'ny 75,000 manerantany. Ho fanampin'ny fandrindrana ny fampielezan-kevitrao dia azonao atao ny mampiasa ny Buffer handrefesana sy hitaterana ny zava-bita sy ny hahatratra azy.
Fa maninona no misafidy Buffer?
✓ Omano sy alamino ny tantaranao Instagram amin'ny Internet na finday
✓ Ampifandraiso ny "rohy misy anao amin'ny bio" amin'ny URL marobe zahana amin'ny pejy azo vidiana
✓ Ampidiro ny fanehoan-kevitra voalohany rehefa mandahatra ny lahatsoratra Instagram ianao
✓ Mamorona, mitahiry ary mandamina tenifototra ampiasaina amin'ny hafatrao Instagram
✓ Ampio ny toerana misy anao sy ny taganao mpampiasa rehefa mandahatra lahatsoratra amin'ny Instagram ianao
✓ Mandrefy ny fahombiazan'ny tantara, ny lahatsoratra tsirairay, ary ny tenifototra
✓ Manamboara tatitra manokana sy zarao amin'ny ekipanao
✓ Mahafinaritra FREE drafitra
Makà valiny amin'ireo fanontaniana mahazatra momba ny paikadin'ny media sosialinao
Raha te hizaha toetra mampiavaka an'i Buffer ianao dia mifidiana drafitra mifanaraka amin'izay ilainao ary atombohy ny fitsarana maimaimpoana anao.
Farany fa tsy latsa-danja dia mifantoka amin'ny fitaovana fitantanana tetikasa. Ny fananana fifehezana ny fizotry sy ny fizotran'asa rehetra dia zava-dehibe amin'ny mpamatsy fizahantany sy hetsika. Ary ny fitaovam-pitantanana tetikasa dia anisan'ny fomba tsara indrindra hanarahana ny fomba rehetra arahana tsara. Ankoatr'izay, tsara izy ireo mitazona ny ekipa voalamina ary mampitombo ny fahombiazany.
Fantaro misimisy kokoa momba ny rafitra fitantanana atiny ankafizin'ny toeram-piasana sy mpamatsy asa.
Asana dia rindrambaiko namboarina sy finday azo namboarina natao hanampiana ny ekipa handamina, hanaraka ary hitantana ny asany.
Mamela anao handrava ny tetikasanao sy ny fiverimberenanao ho asa azo tantanana, samy manana ny daty voatondro, ny subtasks, ny olona voatendry ary ny toetrany hafa.
Miaraka aminy Boky kanban, Asana dia somary malefaka kokoa izao ka afaka mandamina ny fikoriananao amin'ny fomba lôjika indrindra amin'ny orinasanao ianao. Zahao amin'ny horonantsary etsy ambany ity:
Fa maninona no misafidy an'i Asana?
✓ Alamino ho toy ny lisitra na birao Kanban ny asanao
✓ Alao sary an-tsaina ireo fizahana lehibe ao amin'ny tetikasanao handrefesana sy hizarana ny fandrosoana
✓ Omeo tompona mazava ny asanao, mba hahafantaran'ny rehetra ny tompon'andraikitra
✓ Atsaharo ny Subtasks sy ny fizarana
✓ Ataovy miavaka ny tetikasa amin'ny saha manokana
✓ Mifampiresaha ao anaty lahasa
✓ Alefaso ny fanavaozana ny tetikasa
✓ Ampifanaraho amin'ny sehatra hafa ny Asana.
Azonao atao ny misoratra anarana ao amin'ny Asana.com ary mampiasa fitaovana maimaimpoana ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa 15. Misy fiasa mandroso sasany voahidy fa hanana ny zavatra rehetra ilainao ianao hanombohana amin'ny drafitra maimaim-poana. Misy ihany koa ny kinova finday ho an'ny Android sy ny iOS hanarahana ireo zavatra eny an-dalana.
Mitovy amin'ny Asana, Trello dia sehatra iray amin'ny fitantanana tetikasa ekipa. Na izany aza, ny tena ifantohany dia ny kanban boards sy ny fampiasana azy mora kokoa.
Fa maninona no misafidy Trello?
✓ Fifanarahana tsotra hita maso ary fiasa mahitsy-mitete-mitete
✓ Fahaiza-manao fampidirana matanjaka - ampidiro fitaovana miasa ambony
✓ Automation tsy misy kaody
✓ Manamora fifandraisana mora eo amin'ny ekipa
✓ Ny karatra dia misy ny fampahalalana rehetra ilainao
Ity no ampiasainay ao amin'ny Regiondo hanarahana ny asanay manerana ny orinasa iray manontolo. Miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 50, mampiasa Trello izahay mba hampifanarahana ny tetikasa amin'ny sampana samihafa mba hahafahanay manangana sy mamindra ny rafitra famandrihana an-tserasera.
Hanombohana fiaraha-miasa sy fitantanana ireo tetikasanao amin'i Trello, tsotra misoratra anarana amin'ny mailakao ao amin'ny tranonkalany.
Monday is is a customizable web and mobile work management platform and popular alternate for Asana. Izy io dia ampiasain'ny Adobe, Wix, Universal, Walmart, ary marika maro hafa manerantany.
Fa maninona no mifidy ny Alatsinainy?
✓ Mora ampiasaina - atsangano haingana ireo takelaka misy ny tetikasa
✓ Mahasoa sy mora ny manaraka fampianarana misy ao amin'ny tobim-pahalalana
✓ Birao manokana sy ho an'ny daholobe
✓ Fifandraisana sy fampandrenesana mahomby amin'ny fanatanterahana asa iray (tagy ny olona ary raiso ny fampandrenesana rehefa tagged)
✓ Azonao atao ny mamela ny fanehoan-kevitra mivantana amin'ny sary
✓ Azonao atao ny maka tahaka sy mametaka amin'ny Adobe
✓ Topy Analytics sy Tatitra avo lenta
✓ Misy ny fanohanana ho an'ny mpanjifa rehetra fa tsy ny mpanjifa premium ihany
Raha liana amin'ny Alatsinainy ianao, dia araho ny rohy hanomboka amin'ny dingana vitsivitsy
Ireo fitaovana rindrambaiko namboarina sy ampiasain'ny indostrian'ny dia dia malaza noho ny antony iray. Manampy ireo orinasa an'arivony maro hanao fampisehoana ambony sy mihoatra ny andrasany isan'andro izy ireo.
Manantena izahay fa ny safidinay dia manampy anao hahita izay mety amin'ny fitsidihanao na ny orinasan-tseraseranao ary hanatsara ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny asa anatiny.
Ny Mpanjakavavy dia tia an'i Clive Scott, ny GM an'ny Sofitel ...
Ny Air France dia mizaha ny IATA Travel Pass any Montreal-Paris ...
Olona sivy no matin'ny fianjerana fiaramanidina Russia